Ngwa - Beijing Anbesec Technology Co., Ltd.
1. Ogwe USB, ọwara eriri, eriri mmiri, eriri USB na mpaghara ndị ọzọ
Maka nchọpụta ọkụ na mpaghara eriri, LHD nwere ike itinye ya na S-udi ma ọ bụ tinye aka na kọntaktị ikuku (mgbe ekwesighi ka edobe ike USB) ma ọ bụ ịgbanye nkwụsịtụ ikuku na-ebugharị (mgbe achọrọ iji dochie ike ma ọ bụ jigide ya)
Iji hụ na nghọta na ịdị irè nke nchọpụta ọkụ, ịdị elu dị n'etiti LHD na elu nke eriri echedoro ekwesịghị ịkarị 300 mm, a na-atụ aro 150 mm ruo 250 mm.
Iji hụ na ntụkwasị obi nke nchọpụta ọkụ, LHD kwesịrị ịhazi ya n'etiti etiti eriri echekwara ma ọ bụ ihe nkwado mgbe obosara nke eriri USB ma ọ bụ ihe nkwado karịrị 600mm, na LHD nke ụdị 2 ga-arụnyere. .
A na-ekpebi ogologo oge ịchọpụta LHD na-esote usoro site na usoro ndị a:
Ogologo nchọpụta ahụ ogologo ogologo ogologo × ihe na-amụba ọtụtụ ihe
Obosara nke USB tree Ntughari
2. Akụrụngwa Nkesa Ike
Na-ewere ihe nyocha ọkụ ọkụ LHD arụnyere na ngalaba nchịkwa moto dị ka ihe atụ. N'ihi na mma na a pụrụ ịdabere na waya winding na nkịtị, dum ngwaọrụ na-echebe. Ngwa eletriki ndị ọzọ, dị ka onye na-agbanwe ọkụ, ọkụ ọkụ, ogwe mgbochi nke nkesa nkesa, nwere ike ịnwe otu usoro ahụ mgbe ọnọdụ ikuku dị elu anaghị agafe ogo ọrụ ọrụ nke LHD.
Maka nchọpụta ọkụ na mpaghara echedoro, enwere ike itinye LHD na ụdị S ma ọ bụ kọntaktị sine ahụ Onye nyocha ahụ nwere ihe mgbakwunye pụrụ iche iji zere mmebi ọrụ nke nrụgide kpatara. E gosipụtara ọnọdụ nrụnye na ọnụ ọgụgụ ahụ
A na-ebufe belt ahụ na-ebufe site na eriri moto dị na mgbagharị ala belt iji wega ihe. Ngwunye belt ga-enwe ike ịgbanwere kpamkpam na ogwe osisi ahụ n'okpuru ọnọdụ nkịtị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ndị na-agbanye eriri igwe anaghị agbanwegharị kpamkpam, esemokwu ga-eme n'etiti eriri na eriri ahụ. Ọ bụrụ na achọtabeghị ya n'oge, oke okpomọkụ nke esemokwu oge na-eme ga-eme ka eriri na ihe ndị ahụ ebugharị na-ere ọkụ ma na-enwu ọkụ.
Na mgbakwunye, ọ bụrụ na eriri ebu ebu na-ebuga kol na ihe ndị ọzọ, n'ihi na uzuzu coal nwere mgbawa mgbawa, ọ dịkwa mkpa ịhọrọ ọkwa kwekọrọ na ihe nyocha ọkụ ọkụ na-agba ọkụ bụ EP-LHD
Ebu ebu: Kere 1
N'okpuru ọnọdụ na obosara nke onye na-ebufe ebufe adịghị agafe 0.4m, a na-eji eriri LHD nwere otu ogologo dị ka eriri ebu maka nchebe. A ga-edozi eriri LHD ozugbo na ngwa ahụ karịa 2.25m karịa etiti nke eriri ebu. Ngwa nwere ike ịbụ akara nkwụsị, ma ọ bụ site na enyemaka nke ihe ndozi dị na saịtị. Ọrụ nke waya nkwusioru bụ inye nkwado. A na-eji ihe mkpuchi anya edozi waya nkwusioru ọ bụla 75m.
Iji gbochie eriri LHD ka ọ ghara ịda, a ga-eji ihe na-etinye ihe nkedo eriri LHD na waya nkwụsịtụ kwa 4m ~ 5m. Ihe nke waya nkwusioru kwesịrị Φ 2 igwe anaghị agba nchara, na otu ogologo ekwesịghị ịbụ ihe karịrị 150m (enwere ike iji waya nchara gbanwere ya iji dochie ya mgbe ọnọdụ adịghị). E gosipụtara usoro ntinye na ọnụ ọgụgụ ahụ.
Convoyer Belt: Nhazi 2
Mgbe obosara nke eriri ebufe karịrị 0.4 m, wụnye eriri LHD n'akụkụ abụọ dị nso na eriri ebu. Enwere ike ijikọ eriri LHD na bọl na-ebu site na ikpo ọkụ na-eduzi efere iji chọpụta ikpo oke ọkụ n'ihi ibugharị esemokwu na nchịkọta nke kol. Designkpụrụ izugbe na ụkpụrụ ntinye na-adabere na ọnọdụ saịtị na-enweghị emetụta ọrụ na mmezi nkịtị. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ bụrụ na ihe ọkụ ọkụ dị ukwuu, ihe nyocha ọkụ ọkụ LHD nwere ike itinye n'akụkụ abụọ na n'elu eriri ebu ahụ. E gosipụtara usoro ntinye na ọnụ ọgụgụ ahụ
Dị ihe eji arụ ọrụ n'okporo ụzọ na ụzọ ụgbọ oloko bụ idozi eriri LHD ozugbo n'elu ọwara ahụ, usoro ịtọgbọ ahụ bụ nke ahụ na nke ahụ na ụlọ nkwakọba ihe; Enwere ike itinye eriri LHD na eriri USB na ime ụlọ akụrụngwa n'ime ọwara, usoro ịtọgbọ na-ezo aka na akụkụ nke eriri LHD na-etinye na eriri USB.
5. Transzọ Okporo .zọ
Ọrụ nchekwa nke njem ụgbọ okporo ígwè na-agụnye ọtụtụ akụrụngwa, ọkachasị igwe na eletriki na eletrik eletrik bụ ihe dị mkpa na-akpata ọkụ, ọkachasị ọkụ ọkụ bụ isi ihe kpatara ya. Iji chọta ọkụ ọkụ n'isi ụtụtụ n'oge ọkụ ahụ wee chọpụta ebe ọkụ ahụ dị, ọ dị mkpa iji ezi uche hazie onye na-achọpụta ọkụ wee kewaa ụlọ ọkụ. Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ n'ọkụ LHD kwesịrị ekwesị maka ịchọpụta ọkụ USB na ụzọ ụgbọ okporo ígwè. Maka nkewa nke ngalaba ọkụ, biko rụtụ aka na nkọwa ndị dị mkpa.
A na-edozi LHD na-ekpo ọkụ n'ahịrị n'ahịrị ma ọ bụ n'akụkụ nke egwu ahụ ma tinye ya na egwu ahụ. Mgbe enwere eriri USB na egwu ahụ, iji kpuchido eriri ike, LHD nwere ike ịchọta ihe ọkụ ọkụ site na kọntaktị na-efe efe, otu ihe ahụ etinyere na eriri USB.
A na-etinye LHD na mwepu nkwusioru arụnyere tupu oge dịka usoro ntinye nke LHD, ebe dị n'agbata nkwụsị ọ bụla na-abụkarị 1 m-1.5 M.
6. Ugbo Ala maka Mmanụ, Gas, na Petrochemical
Petrochemical, mmanụ na gas tankị bụ tumadi ofu tank tank na sere n'elu ụlọ tank. Enwere ike itinye LHD site na nkwusioru ma ọ bụ kọntaktị kpọmkwem mgbe etinyere ya na tankị.
Ndị tankị n'ozuzu ha bụ nnukwu tankị nwere usoro dị mgbagwoju anya. Ọnụ ọgụgụ ndị ahụ na-ewebata ntinye nke LHD maka ụgbọ mmiri na-ese n'elu mmiri. Oge ọkụ nke mgbanaka akara nke tankị na-ese n'elu mmiri dị elu.
Ọ bụrụ na akàrà akaghị, nchikota mmanụ na gas ga-adị n'akụkụ dị elu. Ozugbo ọnọdụ okpomọkụ gbara ya gburugburu dị oke elu, ọ nwere ike ibute ọkụ ma ọ bụ ọbụna mgbawa. Ya mere, mpụta nke mgbanaka akara nke tankị na-ese n'elu mmiri bụ akụkụ bụ isi nke nlekota ọkụ. A na-etinye eriri LHD gburugburu mgbanaka akara n'elu ụlọ ma na-edozi ya.
7. Ngwa na ebe ndi ozo
Enwere ike itinye LHD na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ n'ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ na ebe ndị ọzọ. Dịka njirimara nke ihe echedoro, enwere ike itinye LHD n'elu ụlọ ma ọ bụ mgbidi ụlọ ahụ.
Dị ka ụlọ nkwakọba ihe na ụlọ ọrụ ahụ nwere ụlọ dị larịị ma ọ bụ ụlọ elu, usoro ntinye nke LHD na-enyocha ihe ọkụ ọkụ na ụlọ abụọ a dị iche iche dị iche, nke akọwapụtara iche iche n'okpuru.
(1) Ntinye nke onye na-enyocha ihe ọkụ ọkụ LHD na ụlọ elu ụlọ
A na-ejikarị ụdị ihe nyocha a na-edozi n'uko ụlọ na waya LHD n'ebe dị anya nke 0.2m. Ekwesịrị ịtọlite ​​LHD na-enyocha ihe ọkụ ọkụ n'usoro n'ụdị nkwụsịtụ yiri nke ahụ, ma kọwaa eriri USB nke eriri LHD. Ebe dị anya n’etiti eriri na ala kwesịrị ịbụ 3M, ọ bụghị karịa 9m. Mgbe anya dị n’etiti eriri na ala karịrị 3m, a ga-ebelata ọdịiche dị n’etiti eriri na ala dịka ọnọdụ si dị. Ọ bụrụ na ọnọdụ nrụnye kwere, a na-atụ aro na a ga-etinye LHD ihe nyocha ọkụ n'ahịrị na nso mpaghara a na-enwu ọkụ, nke nwere uru na onye nyocha nwere ike ime ngwa ngwa na ọkụ.
Mgbe etinyere ya na shelf ụlọ nkwakọba ihe ahụ, enwere ike itinye eriri USB na-achọpụta ọnọdụ dị n'okpuru ụlọ ma dozie ya na etiti akara nke wara wara ahụ, ma ọ bụ tinye ya na ọkpọkọ usoro sprinkler. N'otu oge ahụ, a pụrụ idozi eriri LHD na oghere oghere vetikal kwụ ọtọ. Mgbe e nwere ngwongwo ndị dị ize ndụ na shelf ahụ, ekwesịrị itinye eriri LHD na shelf ọ bụla, mana arụ ọrụ nkịtị nke shelf ekwesịghị emetụta ya, iji zere imebi eriri LHD site na ịchekwa na ịchekwa ngwaahịa. Iji chọpụta ọkụ ọkụ dị ala karị, ọ dị mkpa ịgbakwunye oyi akwa nke eriri ọkụ na-ekpo ọkụ na ntụpọ dị elu maka shelf nwere elu karịa 4.5m. Ọ bụrụ na e nwere sistemụ mmiri mmiri, ọ nwere ike ịdị n'otu na akwa akwa mmiri.
(2) Ntinye nke onye na-enyocha ihe ọkụ ọkụ LHD na ụlọ ụlọ
Mgbe ị na-etinye gburugburu ebe dị otú ahụ, eriri ịdọ aka na ntanetị nke ikuku na-ahụ maka okpomọkụ nwere ike zoo aka na ntanetị nke eriri igwe na-ahụ maka okpomọkụ na ụlọ dị larịị.
Hụ eserese atụmatụ.
(3) Ntinye na ihe ntinye mmanu
Linear okpomọkụ detector LHD tumadi echebe transformer ahụ na nchekwa.
Enwere ike itinye eriri LHD eriri Linear na eriri waya nchara nke nwere mmimita 6 mm gburugburu gburugburu ahụ. Ọnụ ọgụgụ nke winding windo kpebisiri ike dị ka ịdị elu nke onye na-agbanwe ọkụ, na winding na onye na-eche nche agaghị abụ ihe na-erughị 2; thetọ akwa nke eriri igwe dị elu bụ ihe dịka 600 mm n'okpuru mkpuchi elu nke tank mmanụ, na eriri igwe na-ahụ ihe dị ka 100 mm-150 mm site na shei ahụ, ngalaba nke a dị na bracket ma ọ bụ firewall, na Ogwe njikwa nke LHD nwere ike ịdị na ebe ahụ na-abụghị mgbidi na mpụga onye ntụgharị ahụ, nke nwere ogo 1400mm site na ala.